Key ကို Clip Key ကို Clip မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Key ကို Copy ကူးစက်
Key ကို Code ကိုစက်
Key ကို Cutter
Lock ကို Pick Tools များ
Key ကို Clip
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan Key ကို Clip ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - GL-202
ဒီထုတ်ကုန်နှင့်အတူ, သငျသညျကားသော့နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ် keys တွေကိုအပါအဝင်ပန်းကန် keys တွေကိုအမျိုးမျိုးတို့ကို clip နိုင်ပါတယ်။
က clip ဖို့လိုအပျတဲ့အခါဒီဘုံအသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
သုံးစွဲဖို့ပေါ့ပါးလွယ်ကူသောနှင့်အတူ, ကြိမ်နဲ့ save ထိရောက်မှုခြီးမွှောကျ။
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.keymachine.com.tw/my/key-clip.html
သို့: GLADAID ENTERPRISE CO.,LTD
Key ကို Mills စက်
အကောင်းဆုံး Key ကို Clip ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Key ကို Clip မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
အထူးဒီဇိုင်းကြိတ်စက်ကိုသင့်လျော်သောရှုးပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြင့်သင့်လိုအပ်ချက်အပျေါမှာသော့ချက်၏ groove မဆိုမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တိကျသောအမြင့်, ကြိမ် Save & ထိရောက်မှုခြီးမွှောကျ။ 23 PCs မတူညီတဲ့ခုတ်တပ်ဆင်ထား။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင်: 260 မီလီမီတာ (W) * 420mm (ဃ) * 330mm (H)ဘ 23 ကီလိုGW 25 ကီလိုMeas ။ 3.24CUFT မော်တော်: လူပျိုအဆင့် 1/5 HP က110V သို့မဟုတ် 220V, 50HZ သို့မဟုတ် 60 Hz